iMountain View eDouglas
Ngaphantsi kweekhilomitha ezingama-50 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Christchurch iHurunui hub yase-Amberley ime kakuhle njengendawo yokumisa okanye isiseko seholide kulo mmandla. Ilali incedwa kakuhle ngeendawo zokutyela kunye nesithili sewayini saseWaipara esikufutshane. Ixabiso elicatshuliweyo ligumbi eli-1. Kumagumbi omabini yi-$30 ngomntu owongezelelweyo.
Ngentlawulo sinokukuhambisa kwizidiliya. Iindwendwe zamashishini sinokubonelela nge-WiFi enkulu kunye nezibonelelo ezilungileyo zabucala kunye neendawo zokupaka ezikhuselekileyo. Isidlo sakusasa esikhulu selizwekazi siya kukulungiselela usuku lwakho oluxakekileyo.
Ikhaya lethu lentsapho elitofotofo lifudumele kwaye likhululekile. Indlu ifakwe kakuhle kakhulu kwaye ikhazimle kabini ngenkqubo yokungenisa umoya. Kukho umlilo welog one-wetback kunye nokufudumeza kwamanzi ngelanga. Kukho ukufudumeza phantsi phantsi kunye nomzila wetawuli oshushu kwigumbi lokuhlambela elitofotofo. Iindwendwe zinendawo yokuhlambela engundoqo enendawo yokuhlambela ephela kabini.
Iindwendwe zinokukhetha igumbi elinye okanye amabini okulala. Enye inebhedi yendlovukazi enye ineebhedi ezingamawele. Njengoko kube kanye kuphela ukubhukisha okwamkelweyo ngexesha iindwendwe zingabelani ngezibonelelo.
Kukho indawo yokuphumla eyahlukileyo ekhoyo enomabonakude omkhulu nokufikelela kumajelo aseSky. I-WiFi yasimahla iyafumaneka kwakhona. Indlu inomgangatho omkhulu ngaphambili kunye nomgangatho ongasemva okhokelela kwindawo enkulu yokugcina izinto ngaphandle kwekhitshi elikhulu. (Umphambili wendlu unombono omkhulu weMt. Grey). Siyakonwabela ukutshona kwelanga okumangalisayo apha ukuze uphumle kwaye wonwabele umbono ngewayini evela kwesinye sezidiliya zalapha. Ekuseni, unokuwusebenza kwindawo yethu yokuzivocavoca.
Indlu izolile ngeWiFi elungileyo kwaye ifaneleke kakhulu kubahambi beshishini nabo.
Ikhaya lethu alibafanelanga abantwana abancinci njengoko sinedekhi ezingenazo iintsimbi zezandla kwaye indlu yethu ayibobungqina babantwana. Sikulungele ukwamkela abantwana ABADALA phantsi kokhathalelo lwabazali babo.
Kukho iMarike yamaFama eveki zonke kunye neMarike yoBugcisa rhoqo ngentsasa yangoMgqibelo apho ungathengisa khona izinto zalapha ekhaya. Abatyeleli banokonwabela kungekuphela nje iimbono zeentaba kodwa baphumle ngokuhamba ecaleni kolwandle okanye mhlawumbi umjikelo wegalufa enombono wolwandle.
Siza kuzenza sifumaneke njengoko iindwendwe zifuna. Siyakuthanda ukudibana nabantu kodwa siyaqonda ukuba ukhetha ukwenza eyakho into. Sihambe kakhulu kwaye omnye wethu unolwazi olubanzi lwasekhaya kwaye uzimisele kakhulu ukucebisa xa ebuzwa.
Siza kuzenza sifumaneke njengoko iindwendwe zifuna. Siyakuthanda ukudibana nabantu kodwa siyaqonda ukuba ukhetha ukwenza eyakho into. Sihambe kakhulu kwaye omnye wethu unolwazi olu…